IKEA dia mandefa logo vaovao, na dia tsy misy fahasamihafana maro aza hita | Famoronana an-tserasera
El Ny goavambe fanaka Soisa dia namoaka sary famantarana vaovaoNa dia tsy lavitra ny soatoavina hita maso izay nanome azy ny maha-izy azy miaraka amin'ny mavo sy manga mazava tsara mampiavaka an'ity orinasa goavambe ity.
Raha mitady logo vaovao mahery vaika sy hafa ianao dia efa afaka milamina satria tsy toa izany. Ary ny marina fa tsy ho takatra fa namorona sary famantarana tsy mitovy amin'ilay fantatsika sy ny fifamatorany akaiky amin'ity marika fanaka izay tsy maintsy angoninay irery ity amin'ny ankamaroan'ny tranga.
Ny logo vaovao IKEA dia noforonin'i Joakim Jerring avy ao amin'ny masoivoho fitopololahy nipetraka tao Estocomo. Ary tsy dia samy hafa be amin'ilay sary famantarana IKEA teo aloha izay niaraka tamintsika nanomboka tamin'ny 1992.
Nisy logo vaovao namboarina mba hitohy amin'ireo loko ekena sy miaraka aminy izany loharano izany «IKEA». Ny tena mahavariana dia ny sary famantarana marika kely famantarana izay miseho ankehitriny eo amin'ny ankavanana ambony, eo afovoan'ny endrika aforitra boribory misy ny sary famantarana nohavaozina.
Ity iray ity foana ivelan'ny efa-joro mitovy izay nanidy ny boribory boribory mavo, ka tamin'ny voalohany io no zavatra mahavariana indrindra momba ny fanavaozana ny sary famantarana IKEA. Tsy dia hita intsony raha vao jerena, toa somary "boribory boribory" ny oval. Mba hahafahana mampiditra ny loharano fotsiny. Loharano iray izay eo an-joron-tranony dia tsy dia zoro amin'ny tampony; Azonao atao ny manamarina azy amin'ny sary voalohany, izay sary famantarana vaovao) sy ilay hitanao eo anelanelan'ny andalana.
Ny fanovana hafa dia ny fampidirana ny aloky ny manga sy mavo hafa, izay miseho miaraka amin'ny aloky ny manga ambany mba hahazava kokoa azy. Raha fintinina, sary famantarana IKEA izay tsy dia lavitra loatra ary "IKEA" dia tena. Mijanona eo ity rohy ity hahafantarana ny famolavolana sary famantarana tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » IKEA dia mamolavola ny logo azy, na dia tsy misy fampiasa vaovao aza hatramin'ny lasa teo amin'ny 1992
Fitaovana 5 hanampy anao hamantatra loharano
Manampia sary mihetsika amin'ny sary apetrakao amin'ny Instagram miaraka amin'i Scribbl